कास्की ०७६ चैत १९ गते
गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई राहतस्वरुप ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने भएको छ ।
चैत्र १८ गते बसेको ३६ औं मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका ८५ स्थानीय तहलाई राहतस्वरुप सो रकम दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री बस्नेतका अनुसार प्रदेशले राहतस्वरुप पोखरा महानगरपालिकालाई सबैभन्दा धेरै १ करोड रुपैयाँ दिने भएको छ ।
प्रदेश भित्रका २६ नगरपालिकालाई १० र १० लाखका दरले २ करोड ६० लाख र ५८ वटा गाउँपालिकालाई ५÷५ लाखका दरले २ करोड ९० लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘स्थानीय तहले गरिब परिवारको पहिचान गरेर विनियाजित रकमको जिन्सी सामाग्री दिने निर्णय भएको छ’,उहाँले भन्नुभयो । राहत रकमले दैनिक ज्यालादारी गर्ने परिवार भोकै बस्न नपर्ने विश्वास प्रदेश सरकारले लिएको मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो ।
कास्की जिल्ला प्रतिनिधि सुशन घिमिरले कास्कीका ५ वटै स्थानीय तहहरुले राहत वितरणका लागि नाम संकलन कार्य सुरु गरेको जानकारी दिनुभएको छ । पोखरा मनपा— ५ बाट राहत वितरणको लागि नाम संकलन गर्दा वडामा मान्छेको भीड भएको थियो ।
कोरोनाको सामान्य सावधानी पनि नअपनाएर मान्छे जम्मा गरेर नाम संकलन गरिएपछि वडाअध्यक्ष धनबहादुर नेपालीलाई प्रश्नगर्दा नागरिकले राहत बाँड्ने भन्ने बुझेर सबैजना परिवार सहित एकैपटक भेला भएको कारण भीड देखिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो ।
उहाँले आगामी दिनमा थप सावधानी अपनाएर अन्य वडाहरुमा नाम संकलन गरिने बताउनुभयो । महानगरले नाम टिपाउँदैमा राहत दिन नसकिने भन्दै वास्तविक पीडितलाई हेरेर मात्रै राहतदिने जनाएको छ ।
कास्की जिल्लामा लकडाउनको पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन भएको छ । चैत १९ गते ३ बजेसम्म हेल्लो डाक्टर १०९२ मा ५१ जनाले फोन गरेर परामर्श सेवा लिएका छन् ।
कास्कीमा क्वारेन्टाइन संख्या १९, बेड संख्या २ सय १८, क्वारेन्टाइन बसेको संख्या ३३ जना रहेका छन् भने आइशोलेसन बेड संख्या १ सय ११ रहेकामा एकजना पनि रहेका छैनन् । कास्कीमा १ सय १६ आइसियु , ५२ वटा भेन्टिलेटर रहेका छन् ।
कास्कीका ३ र बागलुङ्कका १ जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको हो । स्वाब परीक्षण गरिएको निर्देशनालयका आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका सम्पर्क व्यक्ति नवराज शर्माले अहिले परीक्षण गरिएकामध्ये सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जानकारी दिनुभयो ।
कास्की जिल्लामा रहेको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चैत १८ गते बाट कोरोना भाइरस परीक्षण सुरु भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको पहलमा संघ सरकारले पोखराबाट परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो । चीनबाट आएको पोलिमर चेन रियाक्सन (पिसीआर) मेसिन पोखरा पठाइएको छ ।
मेसिनसँगै आवश्यक उपकरण र प्राविधिक टोली पनि खटाइएको छ । दुईजना प्राविधिकले तीन महिनासम्म कोरोना परीक्षण गर्नेछन् ।
नयाँ पीसीआर मेशिनले एक घण्टामा एक जनाको कोरोना परीक्षण गर्न सक्छ । अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेशबाट ४७ जनाको नमूना संकलन गरिएकोमा २२ जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको छ । त्यसमा १४ जनाको नेगेटिभ र ८ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ ।
रुपा गाउँपालिकको कार्यपालिकाको चैत्र १७ गतेको बैठकबाट दैनिक रुपमा औषधी सेवन गर्ने सबै नागरिकहरुलाई घर घरमा औषधी पुर्याउने निर्णय गरेको छ ।
नवलपरासी(बर्दघाट सुस्ता पूर्व) का जिल्ला प्रतिनिधि तिर्थराज डुम्रेका अनुसार ०७६ चैत १७ गते जिल्लाको सात जनालाई कोरनाको आशंकामा परीक्षणकालागि स्वाब संकलन गरि काठमाण्डौ पठाइएकोमा चैत १९ गते सातै जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)का प्रमुख केशव प्रसाद चापागाईले बताउनुभएको छ ।
सात जना मध्य एक जना कतार र एक जना दुवई बाट आएका थिए । उनीहरु मध्य एक जना कोरोना पुष्टि भएका बाग्लुङकी युवती र एक जना धनगढीका युवा आएकै फ्लाईटमा आएका थिए । अन्य पाँच व्यक्ति यी दुईजनाको सम्पर्कमा आएका व्यक्ति भएकाले उनीहरुको समेत स्वाब परीक्षण गरिएको थियो ।
डुम्रेले जिल्लाका दुई स्थानीय तह, कावासोति नगरपालिका र गैंडाकोट नगरपालिकाले अत्यावश्यक एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क गरेको जानकारी दिनुभएको छ ।
कोरना संक्रमणको त्रासमा एम्बुलेन्स चालकहरूले सुरक्षाको कारण देखाउदै एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न नमानेको अवस्थामा दुई नगरपालिकाले एम्बुलेन्स चालकलाई प्रोत्साहन भत्ता सहित नगर क्षेत्र भित्रका सेवाग्राहीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
गैंडाकोट नगरपालिकामा सबै एम्बुलेन्स सेवा वापतको सबै रकम नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने नगरपालिका प्रमुख छत्रराज पौडेलले बताउनुभयो ।
गैंडाकोट नगरपालिकाले लकडाउनको समयमा बाटोमा पैदल यात्रा गरेका मजदुरहरूलाई खानाको समेत व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयो । नवलपुर सहित विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर पैदल मार्ग हुदै अहिले आफ्नो गृहनगर जाने क्रममा भोकै नहुन भनेर खानाको व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
गोरखा जिल्ला प्रतिनिधि हरिराम उप्रेतीले गोरखा अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमा तीन जना बिरामी उपचाररत रहेको र हाल टेकुबाट स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट आउन बाँकी भएको बताउनुभएको छ ।
यसै हप्ता भारतबाट फर्केका तीन युवालाई शहिद लखन गाउँपलिकाको सामुहिक क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।
लकडाउनका कारण मनास्लु संरक्षण क्षेत्रमा अलपत्र परेका ४६ पर्यटकलाई उद्घार गरिएको छ । आज गोरखाको भिमसेन थापा गाउँपालिका–८ र धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–२ जोड्ने घाटबेसीको झोलुङ्गेपुलमा ताल्चा लगाइएको छ । लकडाउनको बेला पनि आवतजावत बढी भएपछि तल्चा लगाइएको भिमसेन थापा गाउँपालिका–८ का वडा अध्यक्ष वासु थापाले बताउनुभएको छ ।
गोरखा नगरपालिका क्षेत्रका निजी अस्पताल, क्लिनिक, पोलिक्लिनिक र औषधि पसल खुल्ला नराखे कारवाही गर्ने गोरखा नगरपालिकाले चेतावनी दिएको छ ।
बिरामी र सेवाग्राहीबाट निजी मेडिकलबाट सेवा नपाएको गुनासो आएको नगरपालिकाका निमित्त प्रशासकिय अधिकृत बाबुराम बरालले बताउनुभयोे ।
गाउँबाट आएका बिरामीलाई प्राइभेट मेडिकलले लिन मानेन भन्ने गुनासो स्वास्थ्य सेवामार्फत जानकारी पाएकोले लकडाउन आदेश पुर्व उपलब्ध गराउने सम्पुर्ण सेवाहरु नियमित संचालन गर्न भनिएको जानकारी बरालले दिनुभयो ।
तनहुँ जिल्ला प्रतिनिधि प्रकाशचन्द्र भट्टराईले हाल जिल्लामा कोहिपनि सरकारले बनाएको क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा बस्न नपरेको बताउनुभएको छ ।
जिल्लामा स्थानिय तहमा घरभाडा छुट, लकडाउन उल्लंघन गर्नेलाई जरिवाना, भिमाद नगरपालिका र भानु नगरपालिकाले स्वास्थ्य परीक्षणमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० देखी ७५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने जस्ता निर्णयहरु गरेको छ ।
तनहुँका जिल्ला प्रतिनिधिले कोरोना (कोभिड–१९) भाइरसको जोखिम कम गर्ने सरकारले गरेको लकडाउनको कारण सवारी साधन नचल्दा नियमित डायलासिस गर्नु पर्ने मिर्गौलाका बिरामी मारमा परेको बताउनुभएको छ । दमौली अस्पतालमा सन्चालनमा रहेको शत्रुधन मन्जु डायलाइसिस केन्द्रमा डायलाइसिस गर्नका लागि बिरामीलाई एम्बुलेन्स रिजर्भ गरेर महँगो भाडा तिरेरै आउनुपर्ने बाध्यता छ ।
मिर्गौला पीडितले नियमित रूपमा डायलोसिस गराउनुपर्ने भएकाले लकडाउनको बेला पनि डायलोसिस गर्ने बिरामीको संख्या नघटेको डायलोसिस केन्द्रका इञ्चार्ज शैलेश पण्डितले जानकारी दिनुभयो । लकडाउनले बिरामीलाई सास्ती भएपनि जसो तसो नियमित डायलासिस गर्न आउनै पर्ने पण्डितले बताउनुभयो ।
बागलुङ जिल्ला प्रतिनिधि सिर्जना पन्तका अनुसार बडीगाड गाँउपालिका अन्तरगत किटेनी मा.बि. दोभानमा १० क्वारेन्टाइन बेडको तयार गरिएको र उक्त स्थानमा विभिन्न स्थानबाट आएका १० जनालाई राखिएको छ ।.
सबै वडाका वडाअध्यक्षहरुको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति बनाई विदेशबाट आएर होम क्वारेन्टाइनमा नियमानुसार बसे नबसेका अनुगमन गर्ने गरिएको छ र क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुको अवस्था सामान्य रहेको छ ।
काठेखोला गाँउपालिका अन्तरगत तंग्राममा भारतबाट आएका १ जना व्यक्तिको काठेखोला गाँउपालिकासंग समन्वय गरी स्वाब परीक्षणको लागि पोखरा पठाइएको .छ ।
बागलुङ नगरपालिकाकी १९ वर्षीय कोरोना पोजिटिभ देखिएकी किशोरीका बाबा सहित निजका सम्पर्क रहेका सबै ३५ जना र पोखराबाट बागलुङसम्म लिएर आउने जीप चालक सहित निजको परिवारलाई समेत फलोअप गरिएकोमा सबैको अवस्था सामान्य हँुदा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् ।
किशोरीसँगै घरमा रहेको ७ परिवारका सदस्यहरु मध्य ४ जनाको ल्याब परीक्षणको नतिजामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पाइएको छैन । तीन जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ । भारतबाट आएका १५ जनालाई भेट गरी होम क्वारेन्टाइनमा बस्न लगाइएको छ ।
बारेङको सर्बोदय मा.बि. र जनता मा.बि. मा ४. जना विदेशबाट आएका व्यक्तिहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । जिल्लाको विभिन्न हेल्थ डेस्कमा चैत १९ गते २९४ जनाको जाचँ भएको थियो ।
चैत १५ गते कोरोना संक्रमण भएको पुष्टी भएपछि धौलागिरी अञ्चल अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएकी बागलुङ नगरपालिकाकी १९ वर्षीया किशोरीले आफुलाई गाउँले र इष्ट मित्रले फोन मार्फत गाली गरेको बताउँनुभएको छ । आफुलाई फोनमार्फत गाउँमा किन डुलेको, किन हिँडेको, सबैसँंग किन भेट गरेको भन्दै मानसिक रुपमा तनाव हुने गरि बचन लगाएको बताउनुभएको छ ।
लमजुङ जिल्ला प्रतिनिधि दलबहादुर मजाकोटीका अनुसार क्वारेन्टाइन मा ७७ जना बसिरहेका छन् भने हाल आइसोलेशनमा कोहि छैनन् । तीन जनाको स्वाब परीक्षणको लागि पठाइएको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । जिल्लामा तीन स्थानमा फिबर क्लिनिक र नौ स्थानमा हेल्थ डेस्क राखिएका छन् ।
पर्वत जिल्ला प्रतिनिधि सन्तोष थापाका अनुसार क्वारेन्टाइन र आइसोलेशनमा पाँच जना बसिरहेका छन् भने पाँच जनालाई रेफर गरिएको छ । हाल चार जनाको स्वाब परीक्षणको लागि पठाइएको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । जिल्लामा ५२ स्थानमा फिबर क्लिनिक र एक स्थानमा हेल्थ डेस्क राखिएका छन् । हेल्थ डेस्क सुरूमा सात वटै पालिकामा स्थापना गर्ने भनिएपनि लकडाउनका कारण साबिक धौलागिरि अञ्चल प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको डिमुवा प्रहरी चौकीमा मात्रै रहेको छ । हालसम्म ३ हजारले स्वास्थ्य जाँच गराएका छन् ।
म्याग्दी जिल्ला प्रतिनिधि अमृत बास्कुनेले अाज एक जनाको मात्र स्वाब परीक्षणको लागि पठाइएको र रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको बताउनुभएको छ ।
कोरोना संक्रमणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले कम तयारीका बीचमा पछिल्लो समय केही राम्रा कामहरु सुरुवात भएको छ । प्रदेश सरकार भन्दा बढि स्थानिय सरकारहरुले आफ्नो क्रियाशिलता बढाएका छन् । उनीहरुले आफ्ना सबै मातहतका निकायलाई परिचालन गरेर कोरोना संक्रमण मात्रै नभइ नागरिकहरुको दैनिक जनजीवनलाई सहज बनाउन प्रयास गरेका छन् ।